FWA ဆုအပွီး PFA ဆုအတှကျ မနျစီးတီးနဲ့အပွိုငျ ဘယျကစားသမားတှေ စိနျချေါနိုငျမလဲ – Sports A2Z
ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ကနျ့လနျကာပိတျအပွီးမှာတော့ ကစားသမားတှရေဲ့ အသီးအပှငျ့တှကေို ဆုလာဘျအနနေဲ့ ခံစားခှငျ့ရမယျ့ အခြိနျအခါကောငျးက ရောကျရှိလာခဲ့ပွီဖွဈပွီး လကျရှိမှာ ဘောလုံးအားကစားကလောငျရှငျမြားအသငျး FWA က ခြီးမွှငျ့တဲ့ တဦးခငျြးဆုအပွီးမှာတော့ PFA တနှဈတာအကောငျးဆုံးဆုကို ဘယျသူဆှတျခူးသှားမလဲဆိုတာက သခြောပေါကျ အရသာတှစေ့ရာပါ။
PFA ဆုကို ဘယျနကွေ့ငွောမလဲ?
လာမယျ့ဇှနျလ ၄ ရကျနေ့၊ ယူရိုပွိုငျပှဲမတိုငျမီ တပတျအလိုမှာ PFA ဆုရှငျကို ပရိသတျတှေ သိရှိရတော့မှာဖွဈပွီး ၂၀၂၀ ရဲ့ PFA ဆုရှငျကတော့ မနျစီးတီးရဲ့ကှငျးလယျဖနျတီးရှငျဒီဘရိုငျးနားဖွဈပွီး အခု ၂၀၂၁ မှာတော့ ဒီဘရိုငျးနားကပဲ ၂ နှဈဆကျသိမျးပိုကျဖို့ ထပျမံရပေနျးစားနပေမေယျ့ ဒီတခါမှာတော့ ပွိုငျဆိုငျမှုက ပိုပွငျးထနျလာကို တှကွေ့ရမှာပါ။
ယူနိုကျတကျရဲ့ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈနဲ့ စပါးဈရဲ့ ကိနျးတို့ကလှဲရငျ ပရိသတျတှေ သတျမှတျထားကွတဲ့ ကနျြဆနျခါတငျ ၃ ဦးမှာ မနျစီးတီးကစားသမားတှကေသာ နရောယူထားတာဖွဈပွီး ရူဘငျဒီယာ့ဈ၊ ဒီဘရိုငျးနားနဲ့ ဂနျဒိုဝမျတို့ကို တှရေ့မယျ။
FWA ရဲ့ တနှဈတာအကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကိုတော့ မနျစီးတီး​ဗဟိုခံစဈကြောကျဆောငျ ရူဘငျ ဒီယာ့ဈက ဆှတျခူးသှားခဲ့တာဖွဈသလို ဒါဟာ ဒီဆုရဲ့ သမိုငျးတလြှောကျ ၃၂ နှဈအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ခံစဈမှူးတဦးက သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ပျေါတူဂီသားဟာ ကီဗငျ ဒီဘရိုငျးနားနဲ့ ဟာရီကိနျးတို့ကို ကြျောဖွတျရယူသှားခဲ့ရာမှာ သူကပဲPFA ဆုနဲ့ အသငျ့တျောဆုံးသူလို့ ဆကျလကျယူဆခံထားရတယျ။
ဖာနနျဒကျဈက PFA ဆုရှငျဖွဈလာဖို့ ဘှတျကီရဲ့ ကွေးဖှငျ့မှုအမြားဆုံးကိုတော့ ပိုငျဆိုငျထားပွီး ၂၀၂၀ အတှငျး တလတာအကောငျးဆုံးဆုကို ၄ ကွိမျအထိ ရထားခဲ့တယျ။ သှငျးဂိုးနဲ့ ဖနျတီးမှုပေါငျးက ဂိုး ၃၀ အထိ ယူနိုကျတကျအသငျးကို အကြိုးပွုထားတယျ။ အဆငျ့ ၂ မှာ ဇယားငွိမျစခေဲ့တယျ။
ဒီယာ့ဈ ဘယျလောကျကောငျးကောငျး ဒီနှဈမနျစီးတီးကို အံ့အားသငျ့စရာကောငျးစတောက ဘယျလျဂြီယံသားရဲ့ အစှမျးလို့ သတျမှတျခံရမှုတှကေ ရှိနပွေီး ခယျြလျဆီးကို အနိုငျယူပွီး ခနျြပီယံလိဂျကို သရဖူဆောငျးနိုငျခဲ့ရငျတော့ PFA နှဈနှဈဆကျဆုရှငျအဖွဈ အှနျနရီနဲ့ ရျောနယျလျဒိုတို့ရဲ့နောကျ တတိယမွောကျကစားသမားဖွဈလာဖို့ ရှိနတေယျ။
ကိနျးက ရှဖေိနပျဆုရှငျဖွဈခဲ့လို့ PFA ဆုနဲ့ အထိုကျတနျဆုံးသူအဖွဈ သုံးသပျမှုတှလေညျး ထှကျလာခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှုအားကွောငျ့လညျး Playmaker ဆုကိုပါ ရာသီအသိမျးမှာ ထပျမံသိမျးပိုကျခဲ့လို့ အသငျးအောငျမွငျမှုမရှိခဲ့ရငျတောငျမှ တဦးခငျြးစှမျးဆောငျရညျအရ အငွငျးပှားဖှယျရာမရှိ PFA ဆုရှငျ ဖွဈသငျ့တယျလို့ အဆိုပွုခံထားရပါတယျ။
ဆောငျးရာသီကနစေလို့ မနျစီးတီးကို ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈအောငျ တောကျလြှောကျဦးဆောငျလာခဲ့တဲ့ ဂြာမနျကှငျးလယျလူက ဒီဇငျဘာကနေ ဖဖေျောဝါရီအတှငျး ၁၂ ပှဲ၊ ၁၁ ဂိုးသှငျးပွီး ပပျအတှကျ ဇယားထိပျတကျခဲ့ရာလမျးကွောငျးမှာ အဓိကအထောကျအကူပွုခဲ့လို့ သူ့အတှကျ ထိုကျတနျတယျလို့လညျး ယူဆနကွေပါတယျ။
FWA ဆုကိုရော PFA ဆုကိုပါ ၂ ရာသီဆကျ မနျစီးတီးအသငျးသားတှကေပဲ လှမျးမိုးသှားမလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှကေတော့ ကြိနျးသရှေိနသေလို မနှဈက FWA ဆုရှငျ စတာလငျ၊ PFA ဆုရှငျ ဒီဘရိုငျးနားတို့ရဲ့နောကျ ရူဘငျ ဒီယာ့ဈက ဒီခွရောကို ဒီနှဈမှာ ထပျပုံဖျောခဲ့သလို ဗနျဒိုကျလို PFA ဆုကို ယူသှားမလား၊ ဘရူနိုရဲ့ ယူရိုပါလိဂျဖလားနဲ့အတူ ပျေါတူဂီသားတှေ ကွီးစိုးတဲ့နှဈဖွဈလာမလား၊ ဒီဘရိုငျးနားကပဲ ခနျြပီယံလိဂျဆုဖလားနဲ့အတူ အှနျနရီနဲ့ ရျောနယျလျဒိုတို့ရဲ့ အမှခေံကို ဆကျခံပွီး ၂ နှဈဆကျ PFA ဆုရှငျဖွဈလာမလားဆိုတာကတော့…….။
ZAWGYI: ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ကန့်လန်ကာပိတ်အပြီးမှာတော့ ကစားသမားတွေရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ဆုလာဘ်အနေနဲ့ ခံစားခွင့်ရမယ့် အချိန်အခါကောင်းက ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ဘောလုံးအားကစားကလောင်ရှင်များအသင်း FWA က ချီးမြှင့်တဲ့ တဦးချင်ဆုအပြီးမှာတော့ PFA တနှစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကို ဘယ်သူဆွတ်ခူးသွားမလဲဆိုတာက သေချာပေါက် အရသာတွေ့စရာပါ။
PFA ဆုကို ဘယ်နေ့ကြေငြာမလဲ?
လာမယ့်ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့၊ ယူရိုပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ တပတ်အလိုမှာ PFA ဆုရှင်ကို ပရိသတ်တွေ သိရှိရတော့မှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ရဲ့ PFA ဆုရှင်ကတော့ မန်စီးတီးရဲ့ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်ဒီဘရိုင်းနားဖြစ်ပြီး အခု ၂၀၂၁ မှာတော့ ဒီဘရိုင်းနားကပဲ ၂ နှစ်ဆက်သိမ်းပိုက်ဖို့ ထပ်မံရေပန်းစားနေပေမယ့် ဒီတခါမှာတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုက ပိုပြင်းထန်လာကို တွေ့ကြရမှာပါ။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ စပါးစ်ရဲ့ ကိန်းတို့ကလွဲရင် ပရိသတ်တွေ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ ကျန်ဆန်ခါတင် ၃ ဦးမှာ မန်စီးတီးကစားသမားတွေကသာ နေရာယူထားတာဖြစ်ပြီး ရူဘင်ဒီယာ့စ်၊ ဒီဘရိုင်းနားနဲ့ ဂန်ဒိုဝမ်တို့ကို တွေ့ရမယ်။
FWA ရဲ့ တနှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုတော့ မန်စီးတီး​ဗဟိုခံစစ်ကျောက်ဆောင် ရူဘင် ဒီယာ့စ်က ဆွတ်ခူးသွားခဲ့တာဖြစ်သလို ဒါဟာ ဒီဆုရဲ့ သမိုင်းတလျှောက် ၃၂ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ခံစစ်မှူးတဦးက သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပေါ်တူဂီသားဟာ ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနားနဲ့ ဟာရီကိန်းတို့ကို ကျော်ဖြတ်ရယူသွားခဲ့ရာမှာ သူကပဲPFA ဆုနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးသူလို့ ဆက်လက်ယူဆခံထားရတယ်။
ဖာနန်ဒက်စ်က PFA ဆုရှင်ဖြစ်လာဖို့ ဘွတ်ကီရဲ့ ကြေးဖွင့်မှုအများဆုံးကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၂၀၂၀ အတွင်း တလတာအကောင်းဆုံးဆုကို ၄ ကြိမ်အထိ ရထားခဲ့တယ်။ သွင်းဂိုးနဲ့ ဖန်တီးမှုပေါင်းက ဂိုး ၃၀ အထိ ယူနိုက်တက်အသင်းကို အကျိုးပြုထားတယ်။ အဆင့် ၂ မှာ ဇယားငြိမ်စေခဲ့တယ်။
ဒီယာ့စ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဒီနှစ်မန်စီးတီးကို အံ့အားသင့်စရာကောင်းစေတာက ဘယ်လ်ဂျီယံသားရဲ့ အစွမ်းလို့ သတ်မှတ်ခံရမှုတွေက ရှိနေပြီး ချယ်လ်ဆီးကို အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ကို သရဖူဆောင်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့ PFA နှစ်နှစ်ဆက်ဆုရှင်အဖြစ် အွန်နရီနဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုတို့ရဲ့နောက် တတိယမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာဖို့ ရှိနေတယ်။
ကိန်းက ရွှေဖိနပ်ဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့လို့ PFA ဆုနဲ့ အထိုက်တန်ဆုံးသူအဖြစ် သုံးသပ်မှုတွေလည်း ထွက်လာခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှုအားကြောင့်လည်း Playmaker ဆုကိုပါ ရာသီအသိမ်းမှာ ထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့လို့ အသင်းအောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ရင်တောင်မှ တဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်အရ အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိ PFA ဆုရှင် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ အဆိုပြုခံထားရပါတယ်။
ဆောင်းရာသီကနေစလို့ မန်စီးတီးကို ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်အောင် တောက်လျှောက်ဦးဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဂျာမန်ကွင်းလယ်လူက ဒီဇင်ဘာကနေ ဖေဖော်ဝါရီအတွင်း ၁၂ ပွဲ၊ ၁၁ ဂိုးသွင်းပြီး ပပ်အတွက် ဇယားထိပ်တက်ခဲ့ရာလမ်းကြောင်းမှာ အဓိကအထောက်အကူပြုခဲ့လို့ သူ့အတွက် ထိုက်တန်တယ်လို့လည်း ယူဆနေကြပါတယ်။
FWA ဆုကိုရော PFA ဆုကိုပါ ၂ ရာသီဆက် မန်စီးတီးအသင်းသားတွေကပဲ လွှမ်းမိုးသွားမလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့ ကျိန်းသေရှိနေသလို မနှစ်က FWA ဆုရှင် စတာလင်၊ PFA ဆုရှင် ဒီဘရိုင်းနားတို့ရဲ့နောက် ရူဘင် ဒီယာ့စ်က ဒီခြေရာကို ဒီနှစ်မှာ ထပ်ပုံဖော်ခဲ့သလို ဗန်ဒိုက်လို PFA ဆုကို ယူသွားမလား၊ ဘရူနိုရဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ဖလားနဲ့အတူ ပေါ်တူဂီသားတွေ ကြီးစိုးတဲ့နှစ်ဖြစ်လာမလား၊ ဒီဘရိုင်းနားကပဲ ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားနဲ့အတူ အွန်နရီနဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုတို့ရဲ့ အမွေခံကို ဆက်ခံပြီး ၂ နှစ်ဆက် PFA ဆုရှင်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့…….။